:Bọchị: February 10, 2020
Onye isi nchịkwa ndị isi ọdụ ụgbọ elu steeti akpọpụtala ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu, ndị njem na ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu maka ọnwa Jenụwarị 2020. N'ihi ya, na Jenụwarị 2020; Onu ogugu ugbo elu nke dara nke ndi n’ọdụ ugbo elu; [More ...]
Ọkọ akụkọ ihe mere eme Karaköy, nke bụ ụzọ ụgbọ oloko nke abụọ nke ụwa, ga-eme emume afọ nke 145 na Nostalgic Tram, akara nke Beyoğlu, ga-eme afọ nke 106. N'afọ a, IETT na-eme ememme ncheta nke Ọgba na Nostalgic ọnụ. Tọzdee, Febụwarị 11 [More ...]
Denizli bụ ihe atụ na Turkey na njem investments na-emejuputa atumatu Metropolitan Municipality, 2019 km korota ụzọ 140 na 120 km nke ihe Paving ụzọ na ekwo ekwo mkpọchi mere ọrụ. Obodo ukwu na-agafe [More ...]
Ebumnuche nke ime Antalya obodo nke nwere atụmatụ, iwu na njirimara, n'ime mmegharị nke ationgbọ njem Master Plan, a na-edozi nsogbu njem nke obodo na etiti obodo iri na itolu n'otu n'otu. N'okwu a, emere na Elmalı [More ...]
Maka oge mbụ, Ankara Metropolitan Municipality EGO General Directorate na-ahazi ọzụzụ bara uru nke ndị ọkwọ ụgbọala na-eji ụgbọ njem ọha na eze nwere ike iso ụmụ amaala kwurịta okwu nke ọma. Ga-aga n'ihu ruo ngwụsị nke February [More ...]
Manisa Obodo Gbanari fectsgbọala Ọha na Ọha
Na mmekorita ya na Manisa Metropolitan Obodo Director of Health Affairs na Ngalaba Transportgbọ njem, a malitere imebi ihe n'ụgbọ ndị na-enye ọrụ njem ọhaneze n'obodo na n'etiti obodo Manisa. Puku kwuru puku kwa ụbọchị na Manisa [More ...]
Paşabahçe Ferry Pulls nke Haliç mere maka mmeghari ohuru
Ka ị na-eche ụbọchị agụba n'ụsọ osimiri Beykoz, Paşabahçe Ferry akụkọ ihe mere eme, nke a na-ebugharị ya na City Lines site na ebumnuche nke IMM, malitere ịdọrọ ya na çgbọ mmiri Haliç maka mmezi na ndozi. Togbọ a ga-ebugharị ga-alaghachi na Bosphorus na [More ...]
Istanbul Island Ferry na Hike na Fada Havaist
A zụlitere ụgbọ elu Island na Havaist na Istanbul. Obodo isi obodo Istanbul (IMM), ọnụ ahịa njem ụgbọ njem ọha na-abata n'ụtụtụ a, na ọnụahịa tiketi zuru oke maka agwaetiti ndị nwere ọsịsu na Njikọ Obodo. [More ...]
Agụnyere Marmaray Na Sistekulkart Transfer Transfer
Marmaray, nke Ministri Transportgbọ njem na akụrụngwa na-arụ, esonye na usoro mbufegharị nke Istanbulbulkart, na-etinye mkpebi UK UK taa. Ya mere, ụmụ amaala nke nwere tiketi zuru ezu na Marmaray mgbe ụgbọ njem ọha na eze ga-anọchi 7,75 TL [More ...]
Karabağlar Selvili n'okpuruala adọba adọ Lot etinye n'ọrụ taa. Onye isi obodo ukwu Izmir nke obodo Tunç Soyer, onye mere mmeghe ahụ, kwuru na na-agbanye ebe a na-adọba ụgbọala, itinye ego n'ọdụ ụgbọ ala ga-aga n'ihu. Obodo Izmir nke dị na Karabaglar Selvili [More ...]
The Republic of Turkey State Railways (TCDD) abatakwa 1500 aga ime na-emechi na 356 n'ihi ya onu nnyocha maka mbanye nke banyere 190 ụbọchị, n'agbanyeghị mgbe ụfọdụ agafe nkọwa. Nkwupụta nke ndị chọrọ itinye akwụkwọ site na İşkur [More ...]
Kedu oge ọrụ İZBAN na-amalite? Kedu oge ọ na-akwụsị? Lee İZBAN 2020 Oge Ndokwa; İZBAN bụ ụzọ ụgbọ oloko kachasị n'obodo anyị nke jikọtara ọdụ ụgbọ elu, na-eje ozi n'okporo ụzọ dị n'agbata Aliağa Selçuk. [More ...]
Kedu mgbe aga-etinye Keçiören Kızılay Metro?
AKM-Train Station-Red Crescent na-arụ ọrụ, nke ga-ebugharị njem dị n'etiti Kızılay na Keçiören, ka akwadoro imecha afọ na-abịa. Mgbe ahịrị ohuru a na-arụ ọrụ, ụmụ amaala agaghị eme ọfụma na-emeghe n'ụlọ ọrụ AKM. Mịnịstrị nke Transportgbọ njem na akụrụngwa, nke e bipụtara na weebụsaịtị webụsaịtị ya [More ...]
Nzaghachi ngwa ngwa maka mmejọ mmejọ na Kocaeli
Ndị otu na-ahụ maka ngalaba na-ahụ maka njem okporo ụzọ nke Kocaeli Metropolitan Ngalaba Ọdụ intergbọ njem na-etinye aka ozugbo na sistemụ akara a na mpaghara ahụ dum. AKAFKỌ AKWAFKWỌ Kocaeli Obodo Obodo Ndị kachasị mkpa nke okporo ụzọ bụ [More ...]